5-ta kufiicna ee ugu fiican ee xarfaha qurxoon | Abuurista khadka tooska ah
5-ta ugu sarreysa ee beddelayaasha xarafka
Lola curiel | 29/06/2021 10:44 | Fuentes, Dhiirrigelinta, Khayraadka
Haddii aad rabto qoraaladaada ku jira shabakadaha bulshada inay noqdaan kuwo soo jiidasho leh oo hal abuur leh, waa fikrad fiican inaad u tagto waraaqaha loo beddelayo hel farriimaha qabow taasna, shaki la'aan, waxay kaa dhigeysaa inaad ka soocoto kuwa kale. Qoraalkan waxaan ku soo uruurinnay 5-beddelaha ugu wanaagsan ee xarfaha quruxda badan sidaa darteed waxaad marin u heli kartaa farta qoraalka cajiibka ah. Jooji adeegsiga xarfaha asalka ah oo ka dhig qoraaladaada mid ka tarjumaya qaabkaaga!
3 Kalasocodista (Integradeletras.com)
5 Beddelaha Piliapp
Fuenty waa a beddelaha kaas oo siiya marin u helida noocyada kala duwan ee waraaqaha cajiibka ah ee aadka u xiisaha badan. Way fududahay in la isticmaalo, bogga sare ee webkiisa waxaad ka heli doontaa sanduuq aad ku dhex geli karto qoraalkaaga. Markaad sameyso, waxaa si otomaatig ah loogu qori doonaa qaabab kala duwan oo la heli karo. Haddii aad hoos u rogto waxaad heli doontaa batoon aad ku shubto noocyo badan Waxaad haysaa in kabadan lixdan alifbaro! Markaad hesho font kuu habboon, kaliya waa inaad nuqul ka sameysataa oo aad dhajiso.
Ku dhowaad dhammaan ilaha waa cnaxariis leh shabakadaha sida Twitter, Instagram, Facebook ama WhatsApp. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa xaddidan:
Beddelaha ma taageerayo waraaqaha lahjadaha ama xarafka "ñ"
Laguguma talinayo inaad isticmaasho qoraallo aad u dheer, sida ugu badnaan 2 khadadka
Qaarkood jilayaasha lama taageerin by dhufto ee Isku day ka hor intaadan daabicin!
Letrasyfuentes.com te Kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh oo fudud u curiso qoraallo soo jiidasho leh. Kaliya nuqulida iyo dhajinta waxaad ku badali kartaa qaabka asalka ah ee caajiska leh noocyo badan oo hal abuur leh.
Beddelku wuxuu bixiyaa noocyo aan dhammaad lahayn oo qaabab kala duwan ahisticmaalka jilayaal koodh gaar ah ama Unicode. Sidaa darteed, badanaa ma bixiyaan dhibaatooyin badan markay ka fulinayaan shabakadaha bulshada, laga soo bilaabo iyoBarnaamijku ma abuuro astaamo cusub, laakiin wuxuu isku daraa astaamo jira si loo abuuro qaabab gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ma shaqeyso. Xaaladaha qaarkood, barxadaha sida Instagram, Facebook ama Twitter ayaa kala shaandheysa xarfahaas si aysan isticmaaleyaashu ugu xadgudbin astaamaha Unicode, sidaa darteedna ay xannibaan qaar, marka waxaa muhiim ah inaad iska hubiso kahor intaadan isticmaalin!
Conversoresdeletras.com waa a matoor aad u dhammeystiran oo qaabab sheeko-curis iyo hal-abuur leh, guud ahaan waxay bixisaa 73 xarfaha qaabaysan kala duwan Waxa ugu fiican ee barnaamijkan ku saabsan ayaa ah, markaad raadineyso font kuu habboon, waad ku kala shaandheyn kartaa qaab. Waxaad haysaa noocyo kala duwan oo kala duwan oo la heli karo: calaamado, gacmeed, xarrago, dhif, jir ...
para hel qoraalkaaga kaliya waa inaad gashaa waxaad rabto inaad dhahdo sanduuqa kore ee shaashadda ku dhufo geli kumbuyuutarkaaga. Hoosta, waxay si toos ah ugu muuqan doontaa isbeddel noocyada kala duwan ee uu sameeyay xarfahaan quruxda badan ee wax lagu beddelo.
Conversorletras.com waa a nooca matoor soo saara astaamaha unicode, oo si gaar ah loogu talagalay adiga inaad nuqul ka sameysid qoraaladaada kuna dhajiso taariikh nololeedkaaga, qoraaladaada ama faallooyinkaaga. Isticmaalkeeda waa mid aad u fudud, kaliya ku qor qoraalkaaga sida aad caadiyanba u sameyso sanduuqa cad ee ka muuqda korka webka, hoosta waxaad ku arki doontaa isla qoraalkaas oo ku qoran qaabab kale. Dooro midka aad ugu jeceshahay oo taabo batoonka cas ee oranaya "nuqul" Waxaad heli doontaa qoraalka diyaar u ah inuu kula wadaago shabakadahaaga bulshada!
El Beddelaha Piliapp Way xoogaa ka fududdahay kuwii aan horay u soo aragnay inkasta oo noocyada kala duwan ee ay bixiso aysan aad u ballaaranayn, waa wax aad u faa'iido badan, maxaa yeelay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh u beddesho farta qoraalkaaga, isagoo ku siinaya ikhtiyaar u dhexeeya noocyada farta la akhrin karo iyo kuwa quruxda badan. Isticmaalkeedu waa sahlan yahay, waa inaad ku qortaa qoraalka aad rabto inaad u beddesho fagaaraha cad, hoosta waxay ku siineysaa inaad kala doorato qaabab dhowr ah. Markaad gujiso midkoodna, waxaad arki doontaa in qaarkood ay leeyihiin kala duwanaansho kala duwan. Waxaad kala dooran kartaa:
Qoraal xumbo ah, inaad awoodo inaad kala doorato xumbo madow iyo caddaan.
Caano, oo lagu heli karo dhowr nooc: italic, serif, iyo sans serif.
Xarfaha xargaha, waad ka dhigi kartaa kuwo geesinimo leh haddii aad rabto.
Koofiyadaha yaryar, cinwaanada waaweyn.
Qoraalka laba jibbaaran, inaad awoodo inaad kala doorato laba jibbaaran madow iyo caddaan.
Qaab qorista duugga ah, sidoo kale waxaa laga heli karaa geesinimo.
Hoos u dhig qoraalka, waxaad wax ka beddeli kartaa dareenka qoraalka.
Sidoo kale, shabakadda gudaheeda waxaad ka heli doontaa beddelayaal kala duwan qaabab gaar ah. Ma leedahay beddelaha qoraalka ee iskutallaabta taas oo kuu oggolaaneysa inaad ka gudubto qoraaladaada ama aad hoosta ka xariiqdo iyaga oo wata qaabab kala duwan. Xagga sare ee shaashadda, waxaad sidoo kale ka heli doontaa beddel khad aan muuqan, si aad ugu abuurto qoraallo si dhib yar loo akhriyi karo, oo lamid ah khad aan la arki karin oo ku jira iPhone-ka. Ugu dambeyntii, waxay bixisaa a «Zalgo» beddelaha qoraalka kaas oo ku daraya calaamado iyo xuruuf kor iyo hoos qoraalka asalka ah.
Sida kuwa kale ee beddelaya xarafka warqadda qurxoon, tan ayaa ku jirta waa inaad qortaa qoraalkaaga, doorataa qaab oo aad nuqul ka dhigtaa weedha la beddelay si loo hirgeliyo shabakadahaaga bulshada Hubi in barxadda ay taageerto dhammaan jilayaasha!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 5-ta ugu sarreysa ee beddelayaasha xarafka
Diraya faylal waaweyn: waa kee aaladda ugu fiican ee bilaashka ah?
Noocyada waraaqda daabacaada